Aadan Ducaale oo sheegay in Kursiga QM aanay u adeegsan doonin khilaafka Soomaaliya - Jowhar Somali news Leader
Home News Aadan Ducaale oo sheegay in Kursiga QM aanay u adeegsan doonin khilaafka...
Aadan Ducaale oo sheegay in Kursiga QM aanay u adeegsan doonin khilaafka Soomaaliya
Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay kursiga ay ku guuleysteen ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey aanay u adeegsan doonin khilaafka xilligan ka dhaxeeya Soomaaliya.
Aadan Ducaale oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqeyn doono wanaajinta ammaanka caalamka, gaar ahaan kan gobolka.
“Waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay kamid ahayd dalalkii noo codeeyay markii aan musharraxa ka ahayn Midowga Afrika…. Arinta badda waxay hor taallaa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Soomaaliya waxay ogoshahay maxkamadda waxay go’aamiso, anagana sidoo kale, Dalal walaalo ah ayaan nahay, mana kala go’ayno” ayuu yiri Aadan Barre Ducaale.
Guusha Kenya ka gaartay Kursiga ayaa ka dhigan in muddo labo sano ay ka mid noqon doonto 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, waxayn saameyn ku yeelan kartaa marka laga hadlayo go’aanada amniga iyo xasilloonida caalamka.
Sidoo kale waxay ku lug lahaan kartaa doorashada garsoorayaasha Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ, oo haatan ay taallo dacwada badda ee Soomaaliya kala dhaxeysa.